Nọmba ndị ọbịa 2017 nke Estonia gbagoro ka ọ na-aga maka emume narị afọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Tourism » Nọmba ndị ọbịa nke Estonia 2017 na-ebili ka ọ na-aga maka emume narị afọ
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ gbasara Estonia • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem
Nọmba ndị ọbịa nke Estonia 2017 na-ebili ka ọ na-aga maka emume narị afọ
Estonia enwetala nnukwu mbuli elu na ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa na 2017, yana ọnụọgụ ndị njem UK na-abawanye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ ise ma e jiri ya tụnyere oge ahụ n'afọ gara aga. Ọnụọgụ nke ọnwa Jenụwarị na Septemba gosipụtara mbuli elu nke 19% na afọ gara aga, yana ndị ọbịa karịrị 46,000 UK gafere ọnwa 9.
Akụkọ a na - abịa dịka ebe a na - akwado maka ESTONIA 100 na 2018 - mmemme pụrụ iche nke mmemme na atumatu iji mee emume ncheta afọ 100 nke nnwere onwe nke Republic of Estonia.
Ememme ga-eme n’ime afọ niile iji gosipụta akara ngosi kachasị mkpa na ntoputa nke Estonia dịka mba jikọrọ ọnụ. A dịgasị iche iche nke nanị ihe omume - ekpuchi isiokwu si akụkọ ihe mere eme na ihe nketa na-imewe, music na ọdịdị - ga-ewere ọnọdụ gafee mba.
Ihe omume UK gosipụtara ga-agụnye mmemme pụrụ iche nke egwu sitere na The Estonian Philharmonic Chamber Choir na London's Barbican Center na Jenụwarị 2018 na ngosipụta ihe nkiri pụrụ iche sitere na Estonian Contemporary Art Development Center na London site na Machị ruo Ọktọba 2018. A ga-ekwenyekwa na ihe omume UK ọzọ izu ndị na-abịanụ.
Ihe omume na-eme na Estonia gụnyere ihe nkiri ihe nkiri nke “Akụkọ nke Narị Afọ” ebe a na-agwa 100 afọ nke akụkọ ntolite Estonia gafee ụbọchị 13; emume ncheta ‘International Dance Day’ nke Estonia na-agba egwu bọọlụ; na opera pụrụ iche akpọrọ "Estonia akụkọ - mba nke amụrụ ụjọ". Usoro ihe omume a na-agụnye mbipụta pụrụ iche nke ememme kwa afọ na-eme na Estonia, dị ka Tallinn Week Music (tmw.ee), Oge Dị Mfe (nnọkọ.ee) na Ememe Music Parnu (parnumusicfestival.ee).
Estonia anatawo ọtụtụ nnabata na 2017, gụnyere Tallinn ka a na-akpọ nọmba ụwa kachasị mma 1 kacha mma na 2018 site na Lonely Planet's Best in Travel. Akwụkwọ njem a na-eme ememme na-egosipụta mba iri kachasị elu, obodo, mpaghara na ebe kachasị mma ndị ọkachamara Lonely Planet kwadoro ndị njem na 2018.
Ma amụma nke 2018 dị mma na akụkọ banyere ụba ụgbọ elu si UK. Na nso nso a Wizz Air kwupụtara ọkwa ụgbọ elu anọ kwa izu n’izu site na London Luton ruo Tallinn site na June 2018. Ọzọkwa, British Airways ọrụ ugboro abụọ kwa izu site na London ruo Tallinn, nke ewepụtara n’afọ a, abanyela n’afọ niile. Zọ ndị a ga-eme ka ụzọ ụgbọ elu Tallinn kwụ ọtọ nke Easyjet na Ryanair na-arụ ọrụ.
Tarmo Mutso, Director nke Estonian Tourist Board kwuru, sị:
“Edebere 2018 ka ọ bụrụ afọ dị mkpa maka Estonia, nwee mmemme dịgasị iche iche ga-eme nke otu narị afọ maka ndị mmadụ ịnụ ụtọ gburugburu ụwa, yana mba anyị. Obodo UK bu oke ahia di nkpa maka Estonia ma dika ndi nleta Estonia gbasiri ike itinye ego n'inwe njem nlegharị anya. Obi dị anyị ụtọ ịhụ na mba anyị amaala ndị Britain na 2017.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50% nke mba anyị bi n'oké ọhịa na agwaetiti karịrị 2,000, Estonia bụ ebe kachasị mma iji nweta ọtụtụ ihe omume n'èzí, na-enwe anụ ọhịa ma na-eku ume ikuku dị ọcha n'ụwa. The ọdịdị ngwaahịa na-gbakwunyere anyị isi obodo si kpokọtara UNESCO ochie obodo, otutu Nordic nri idaha na pụrụ iche nketa na omenala. Anyị bụ ndị anyị na-atụ anya ịnabatakwu ndị ọbịa si UK na obodo anyị n'afọ ọzọ. "